'प्लास्टिक झोला प्रयोग गरे कारबाही' - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारबिहीबार, बैशाख ३, २०७२
‘प्लास्टिक झोला प्रयोग गरे कारबाही’
१ वैशाखदेखि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको वातावरण विभागका महानिर्देशक डा. सुरोज पोखरेल भन्छन्, “जति गर्दा पनि वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिएपछि प्लास्टिक झोला हटाउनुको विकल्प भएन।” उनीसँग हिमालले गरेकाे कुराकानीः–
सरकारले प्लास्टिक झोला किन पूरै निषेध गर्न लागेको?
नदी, पार्क, सार्वजनिक स्थल, जताततै प्लास्टिक नै प्लास्टिक भएको छ। वागमतीको फोहोर भन्नु नै प्लास्टिक हो भन्दा हुन्छ। जाडो महीनामा आगो समेत प्लास्टिक बालेर ताप्छन्। वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न नसकिएपछि प्रतिबन्ध एक मात्र विकल्प बन्यो। प्रतिबन्धको मूल उद्देश्य वातावरण प्रदूषण न्यून गर्नु हो।
निषेध कहाँ कहाँ हुन्छ?
सिंहदरबार, अरु सरकारी कार्यालयहरु र देशैभरि प्रतिबन्धित गर्न लागेका छौं। काठमाडौं उपत्यकामा बढी निगरानी हुन्छ। सरकारको यो निर्णयलाई सबैले आफ्नै लागि हो भनेर बुझे प्लास्टिकको फोहोरबाट मुक्त हुन गाह्रो पर्ने छैन।
अटेर गर्नेलाई के हुन्छ?
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुन्छ।
प्लास्टिक झोलाको विकल्प के छ?
हामीले उहिल्यैदेखि प्लास्टिकको झोला प्रयोग गरेका होइनौं। २५–३० वर्षयता मात्रै यसमा बानी पर्‍यो, व्यापकता आयो। हामीसँग पहिल्यैबाट कपडा, कागज, जुट आदिका झोला थिए। प्लास्टिकको विकल्प तिनै झोला हुन्। संसारका धेरै देशले त्यही विकल्प रोजेका छन्, हामी पनि त्यही गर्छौं।
प्लास्टिक उद्योगीले रोजीरोटी खोसियो भन्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् नि!
हामीले वैकल्पिक व्यवसायको विषयमा प्लास्टिक उद्योगीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थियौं। उहाँहरूले वैकल्पिक उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव सहित सरकारलाई गुहार्दा राम्रो हुन्छ। कसैको व्यवसायका लागि सरकारले सबैको स्वास्थ्य जोखिममा राख्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतबाट पनि सरकारले यो निर्णय लागू गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको छ।